. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ဟိုရောက် ဒီရောက် (၄)
ဟိုရောက် ဒီရောက် (၄)
ဟိုနေ့က ထူးထူးခြားခြား ဆောင်းနံ့လေးကို ရလိုက်မိပါတယ် .. သူငယ်ချင်း အိမ်က အထွက်မှာ ချမ်းစိမ့်စိမ့် လေစိမ်းနဲ့ အတူ ရလိုက်တဲ့ ရနံ့ကတော့ ဒီကိုရောက်ပြီး တခါမှ မရဘူးသေးတဲ့ ဆောင်းရဲ့ ရနံ့လေးပါပဲ ..
ငယ်ငယ်တုန်းက အချိန်ကို ပြန်လိုချင်တယ်လို့တော့ မငြီးငြူမိပါဘူး .. ဖြစ်လည်း မဖြစ်နိုင်တာပဲ .. တခါတလေတော့လည်း ငယ်ငယ်တုန်းက ဘယ်လို ဆိုတာမျိုးလေးပဲ ပြန်အမှတ်ရနေချင်မိပါတယ် .. တမ်းတစရာ သိပ်များများ စားစား မရှိပေမယ့် အဲဒီထဲကမှ လွမ်းစရာလေးတွေကို တချက်တချက် အမှတ်ရမိနေရုံလောက်ပါပဲ ..
ကလေး ကာတွန်းကားလေးတွေကို ကြည့်ရတာ တကယ်စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတာပဲ .. ဆေးကြိမ်လုံးလေးတလုံး ရှိရုံနဲ့ စားစရာ သောက်စရာတွေနဲ့ အ၀တ်အစား လှလှတွေ ဖန်တီးနိုင်သလို အဆုံးသတ်မှာလဲ ပျော်ရွှင်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဇာတ်သိမ်းနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ချည်းပဲ .. (စိတ်ချမ်းသာစရာပဲး))
ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ကိုယ့် တူလေးတယောက်ကို သတိရမိသေးတယ် .. တခါ အိမ်ရှေ့မှာ မြောင်းဖော်နေတဲ့ လူတွေရှိနေတဲ့အချိန် အိမ်က အမနဲ့ တူလေးနဲ့က ၀ရန်တာမှာပေါ့ .. အပြင်ကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ .. ကလေးဆိုတော့ ဟိုမေး ဒီမေး မေးတယ်ပေါ့ .. ဟိုဦးဦးတွေက ဘာလုပ်နေတာလဲ ဘာလဲ ညာလဲပေါ့ .. အမကလည်း ဂွင်ဝင်တုန်းကလေးကို ဆုံးမချင်သေးတာကိုး .. ကလေးက ကျောင်းတော့တက်နေပြီ .. လက်ရေးက အဒေါ်လုပ်တဲ့သူခြေရာနင်းလို့ တော်တော်လေးလဲ စုတ်ပါတယ် .. :P .. ကလေးကို စာကြိုးစားစေချင်တော့ အမက "ဒီ ဦးဦးတွေက ငယ်ငယ်က စာကောင်းကောင်းမဖတ်လို့ လက်ရေး လှလှမရေးလို့ ခုလို ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ရတာ .. သားသားရော စာလုပ်မလား အသက်ကြီးမှ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်မလား" ဆိုပြီးမေးရော .. ဒီတော့ ကလေးကလည်းပြန်ဖြေတယ် .. "သားသားကြီးလာရင် အဲဒီဦးဦးတွေလို လုပ်မှာ" တဲ့လေ .. :P ကလေးစိတ်ထဲ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုး သူစဉ်းစားမိတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. :D (စာတော့မလုပ်ဘူး ချီပုံးပဲ ထမ်းမယ်ဆိုတာတောင် သွားသတိရမိသေးတယ် .. :D)
ကလေးတွေနဲ့ နေရတာ ရီလည်း ရီရတယ် .. တခါတလေလည်း သည်းမခံနိုင်လောက်အောင်ကို ဖြစ်ရတယ် .. :D
ဒီမှာ တူတူရှိနေတဲ့ အမ၀မ်းကွဲတွေနဲ့ မိုးခါးနဲ့က ညီအမအရင်းတွေလိုပဲ ရင်းနှီးတယ် .. ချစ်လည်း ချစ်တယ် .. အဲဒီအမတွေက မွေးထားတဲ့ တူ တူမ ၃ယောက်ရှိတယ် .. သူတို့နဲ့ တူတူနေရရင် ကိုယ့်မှာ ရီရခက် ငိုရခက် အမြဲတမ်းဖြစ်တယ် .. ခုနောက်ပိုင်း ကလေးတွေက ကျွေးတဲ့အစာတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်မလားမသိဘူး လူဖြစ် သိပ်မြန်တာပဲ .. မြင်နေတွေ့နေရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ ဇာတ်လမ်း ရုပ်ရှင်တွေကြောင့်လဲ ပါမယ်ထင်တယ် ..
တူမလေးရဲ့ အဖေက ရုပ်ရှင် သိပ်ကြိုက်တယ် .. အငြိမ့်ကအစ ဘယ်လိုကားဖြစ်ဖြစ် သူကြည့်တယ် .. အဖေက ကြည့်တော့ သမီးပါ ကြည့်ပြီပေါ့ .. မြန်မာမင်းသား မင်းသမီးတွေရဲ့ ချစ်ခန်းကြိုက်ခန်းတွေက မျက်စေ့ ယဉ်နေပါလိမ့်မယ် ..
တရက်ကျတော့ မိုးခါးတို့ပါရှိနေတဲ့အချိန် .. မိုးခါးသူငယ်ချင်းပါရှိတယ် .. သမီးကို မေးတာပေါ့ .. ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်း ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ .. ယောကျာင်္းလေး သူငယ်ချင်းဘယ်နှစ်ယောက် မိန်းကလေး သူငယ်ချင်း ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိလဲပေါ့ .. အဲဒီတုန်းက ကလေးက သူငယ်တန်း အကြိုပဲရှိသေးတယ် .. ကလေးကလည်း ပြောရင်းနဲ့ "သမီးမှာ ကြိုက်တဲ့ကောင်လေးရှိတယ်တဲ့ .." သူ့အဖေရော အမေရော မျက်လုံး ပြူးရော .. ဒါနဲ့ မကြီးက "သမီး ကြိုက်တယ်လို့ မပြောရဘူး .. ခင်တယ်ပြောရတယ်" လို့ဝင်ပြောရော .. ဒီတော့ ကလေးက "မဟုတ်ဘူး မာမားရဲ့ .. သမီးက ခင်တာမဟုတ်ဘူး .. သဘောကျတာ" တဲ့လေ .. ကောင်းရော .. မိုးခါးတို့မှာလည်း မကောင်းမှန်း သိပေမယ့် ရီကလည်း ရီချင် .. :D ဒါကြောင့်ပြောပါတယ် .. ကလေးတွေက အတုမြင် အတတ်သင် သိပ်မြန်တယ်လို့ ..
ရပ်ပါဦးမယ် .. နောက် စိတ်ကူးပေါက်မှ ပေါက်ကရ ထပ်ရေးပါဦးမယ် .. ခုတလောလည်း လူက နဲနဲ လွတ်ချင်နေလို့ .. :P
ရေးသားသူ မိုးခါး at 12/17/2009 10:58:00 PM
ကျမနှင့် ပုံရိပ် ဒီဇင်ဘာ